ဂေါ်ဂင်ပန်းချီ တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင် ရောင်းရ
ကျောင်းသား နဲ့ ပညာရေးကွန်ယက် သတင်းစာရှင်း
ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်က အရောင်းအ၀ယ်အေး (ရုပ်/သံ)
အရွယ် မရောက်သေးသူအား အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်
ဘတ်ဂျက်ငွေတိုးလာသည့်နှင့်အမျှ ဝန်ကြီးဌာနများ အလွဲသုံးစားပိုလုပ်လျက်ရှိ
ဧရာဝတီကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်း မအူပင်သို့ စတင်ချီတက်
ဘရာဇီးတွင် ဘဏ်ဓားပြဂိုဏ်းနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်၊ ၁၂ ဦးသေဆုံး
ဟူသီသူပုန်များက ယီမင် အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖြုတ်ချက အာဏာသိမ်းပိုက်
ကလေးငယ်များကို လိင်လုပ်သားများ အဖြစ် ISIS အဖွဲ့က ရောင်းချလျက်ရှိ ဟု ကုလပြောကြား
အိုင်အက်စ်ရုပ်သံပါ အမျိုးသမီး ဂျူးကုန်စုံဆိုင်စီးနင်းခဲ့သူ ဟုတ်မဟုတ် ပြင်သစ်ရဲစစ်ဆေး
အိုင်အက်စ်ကိုတိုက်ရန် သေနတ် ပြောင်းကိုင်လိုက်သည့် ဆရာမ
ISIS ချေမှုန်းရေးတွင် ဂျော်ဒန်ဘုရင်အဗ္ဗဒူလာကိုယ်တိုင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်
မြန်မာနိုင်ငံကို ခေါင်းဆောင်နိုင်သေးသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယုံကြည်
မက္ကဆီကိုတွင် စွန့်ပစ်အလောင်း ၆၀ မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်ထဲ တွေ့ရှိ
IS လက်ထဲက အမေရိကန် ဓားစာခံ အမျိုးသမီး ကံကြမ္မာ
မြန်မာအလုပ်သမားများထံမှ ဘတ်ငွေ ၅ သန်းခန့် လိမ်ယူမှုကြီး စတင်စစ်ဆေး
၄ ပွင့်​ဆိုင်​တွေ့​ဆုံ​ရေး ပြန်​စ​ဖို့ အကြမ်း​ဖျင်း သဘောတူ
မြိတ်မြို့အောင်မင်္ဂလာဈေးအတွင်းရှိ ရွှေဆိုင်တွင် လုယက်မှုဖြစ်ပွား
ကျိုက်ထီးရိုးရင်ပြင်တော်တွင် ခါးပိုက်နှိုက်သူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး
ဖေဖော်ဝါရီလ (၈)ရက်နေ့ ထုတ် EURO SPORTS Journal ( Vol-5No- 45 )
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၇)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ
Posted: 07 Feb 2015 07:29 AM PST
Paul Gauguin ရဲ့လက်ရာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ နီးပါးနဲ့ စံချိန်တင်ရောင်းချလိုက်တဲ့ "When Will You Marry?" ပန်းချီကား မြန်မာပြည်မှာ “ဂေါ်ဂင်” လို့သိကြတဲ့ ပြင်သစ် ပန်းချီ ဆရာကြီး ပေါလ်ဂူဂန် (Paul Gauguin) ရဲ့ Tahitian ကျွန်းသူ ၂ ယောက်ထိုင်နေကြတဲ့ ပုံပန်းချီကားကို စံချိန်အမြင့်ဆုံး တန်ဖိုးနဲ့ ရောင်းလိုက်ရပါတယ်။ When Will You Marry? ဘယ်တော့လက်ထပ်မှာလဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ 1892 ခုနှစ်က ရေးဆွဲ
Posted: 07 Feb 2015 07:22 AM PST
စစ်ကြောင်း ၃ ကြောင်း ခွဲပြီး ရန်ကုန်ကို ချီတက် ပညာရေး ဥပဒေ ပြုပြင်ရေး အတွက် ၄ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ တွေ အမြန်ဆုံး ပြန်စ ဖို့ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသား တွေနဲ့ ပညာရေး ပြုပြင် ရေး ကွန်ယက် ရဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ က တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။ နေပြည်တော် ဆွေးနွေးပွဲ ကို အစိုးရက တဘက်သတ် ဖျက်သိမ်း ခဲ့တယ်လို့ သူတို့ ဘက်က ရှင်းပြပြီး နောက် ဆွေးနွေးပွဲ တွေမှာ အားလုံး လက်ခံ နိုင်မယ့် ညှိနှိုင်းသူ တွေကိုပဲ ထား
Posted: 07 Feb 2015 06:25 AM PST
ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်က အရောင်းအ၀ယ် အေးနေလို့ မြို့အစွန်ပိုင်းက မြေကွက်တွေရဲ့တန်ဖိုး က လက်ရှိမှာဆိုရင် သုံးပုံတစ်ပုံအထိ ကျဆင်းမှု ရှိနေပါတယ်။ဦးသိုက်ဇင်ရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်မှာ ရှုစားနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ DVB TV News ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 07 Feb 2015 05:05 AM PST
ပုလဲမြို့နယ်၊ ကြက်ရင်း ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း အသက် (၄) နှစ်အရွယ်ရှိ အရွယ်မရောက် သေးသူ တစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်ကာ ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ခဲ့မှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပုလဲမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။ ယခုလ (၄) ရက်နေ့ နံနက် (၇း၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ပုလဲမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကြက်ရင်း ကျေးရွာ အုပ်စု ဖုန်းတောတိုက်တွင် နေထိုင်သည့် ဦး.......နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ တို့သည် (၂) မိုင်ခန့် ကွာဝေးသည့် ကြက်ရင်း ကျေးရွာ
Posted: 07 Feb 2015 04:53 AM PST
နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေများကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုတိုးပေးနိုင်ရန် လွှတ်တော်က ခွင့်ပြုပေးလေ ဘဏ္ဍာ ငွေအလွဲသုံးစား ပြုလုပ်မှု ပိုမိုများ လာလေကို တွေ့ရှိရကြောင်း ပြည် သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်း က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြောဆို ခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများ သည် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေများ ကို နေ့ပြန် တိုးပေးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း စသည့် အလွဲ သုံးစားမှုများ ပြု
Posted: 07 Feb 2015 04:46 AM PST
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးဖွားရာ ဇာတိ မကွေးတိုင်း၊ နတ်မောက်မြို့မှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပြီး ထောင်သောင်းချီတဲ့ ပြည်သူတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ နတ်မောက်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ်ထုရင်ပြင်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် မနက်ပိုင်းက ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နတ်မောက်နဲ့ အနီးနားမြို့တွေက ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားကြည်ညိုတဲ့
မော်စကို ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရုရှားနိုင်ငံ မြို့တော်မော်စကို၏ အစွန်အဖျားရှိ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင် ကျားနှင့်ကျားသစ်တို့၏ အသားများ၊ အရေခွံများကို ဟင်းလျာအဖြစ် ရောင်းချနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရာမှ ယမန်နေ့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ဒေးလီးမေးလ်သတင်း ဌာနက ယနေ့ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါစားသောက်ဆိုင်တွင် ကျားခေါင်းများကိုလည်း ရောင်းချနေပြီး ကျန်အစိတ်အပိုင်းများကို ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးဈေးကွက်သို့ေ
Posted: 07 Feb 2015 03:54 AM PST
ညောင်တုန်းမြို့၌ ယမန်နေ့က ညအိပ်ရပ်နားခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီပညာရေး ဧရာဝတီသပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ ယနေ့နံနက် ၉ နာရီမှစတင်၍ ညောင်တုန်းမြို့အတွင်း လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး မအူပင်မြို့သို့ စတင်ချီတက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဧရာဝတီသပိတ်စစ်ကြောင်းထံသို့ ရန်ကုန်မြို့မှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအင်အားစုများကလည်း ယမန်နေ့ညပိုင်းက လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ညောင်တုန်းမြို့ရှိကျောင်းသားများကလည်း ပါဝင်ချီတက်နေရာ ကျော
ဓာတ်ပုံ – ရိုက်တာဗွီဒီယို ဘရာဇီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဆယ်လ်ဗာဒိုး ပြည်နယ်မှာ ဘဏ်ဓားပြတိုက်ဖို့ ကြံစည်တဲ့ ဂိုဏ်းတဂိုဏ်းနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ မနေ့က အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး လူ ၁၂ ဦး သေဆုံး၊ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရပါတယ်။ ဘာရီးရပ်စ်လမ်းပေါ်က ဘဏ်ကိုလုဖို့ အမျိုးသား အယောက် ၃၀ ပါတဲ့ အုပ်စုက စီစဉ်နေကြာင်း ထောက်လှမ်းရေးက ဒေသခံ ရဲကို အကြောင်းကြားခဲ့အပြီး နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ်ဓားပြတိုက်
တောင်ဆူဒန်မှာ တိုက်ပွဲတွေ မပြင်းထန်တော့ပေမယ့် မုဒိမ်းမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဆက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး အီဗန် ဆိုင်မွန်နိုဗစ်က ပြောပါတယ်။ တောင်ဆူဒန် ခရီးစဉ်အတွင်း မုဒိမ်း အကျင့်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့အပြီးမှာ အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့် အစိုးရနဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေအကြေား မကြာခင်က ဆွေးနွေးထား
Posted: 07 Feb 2015 03:44 AM PST
ဆာနား ၊ ၇-၂-၂၀၁၅ ယမန်နေ့တွင် ယီမင်နိုင်ငံ၏ ရှီးယား ဟူသီသူပုန် များက အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖြုတ်ချလိုက်ပြီ ဖြစ်ကာ ပါလီမန်ကို ဖျက်သိမ်း လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ငါးဦး ကောင်စီဖြင့် ကြားဖြတ် သမ္မတ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် သွားမည်ဟု နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဟူသီသူပုန် များသည် ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလ ကပင် ယီမင်မြို့တော် ဆာနား ကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး သမ္မတ အာဘတ်ရက် ဘိုမမ်ဆွာဟာဒီ
Posted: 07 Feb 2015 03:42 AM PST
ဂျီနီဗာ ၊ ၇-၂-၂၀၁၅ ISIS စစ်သွေးကြွ များသည် ၄င်းတို့ ပြန်ပေးဆွဲ ထားသည့် အီရတ် နိုင်ငံသား ကလေးငယ် များကို လိင်လုပ်သား အဖြစ် ဈေးများ၌ ရောင်းချမှု ပြုလုပ် နေသည့်အပြင် အခြား ကလေးငယ် များကိုလည်း ကားစင်တင် သတ်ဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရှင် လတ်လတ် မြေမြှုပ်ခြင်း ကဲ့သို့သော ရက်စက်သည့် နည်းလမ်းများ သုံး၍ သတ်ဖြတ် နေကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင် ကုလသမဂ္ဂ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ က ပြောကြားသည်။ ISIS စ
Posted: 07 Feb 2015 03:40 AM PST
အစ္စလာမ်မ္မစ် နိုင်ငံတော် အမည်ခံ (အိုင်အက်စ်)ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗွီဒီယိုထဲက အမျိုးသမီးဟာ ပဲရစ်အရှေ့ပိုင်းက ဂျူးကုန်စုံဆိုင်ကို စီးနင်းသူ အမျိုးသမီး ဟုတ်မဟုတ် ပြင်သစ်တာဝန်ရှိသူတွေက စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီလက ပြင်သစ်နိုင်ငံ မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကို သေနတ် သမား ၂ ဦးက ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၁၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ပုံနှိပ်တိုက်ကို စီးနင်းထားစဉ်မှာ ဂျူးဘာသာယုံကြည်သူတွေအတွက် ဖွင့်ထားတဲ့ အစားအသောက် ကုန်စုံဆို
Posted: 07 Feb 2015 03:36 AM PST
ဓာတ်ပုံ – cbsnews ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ကိုဘိန်းအနီးက အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံတော် (အိုင်အက်စ်)တွေကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာမှာ ကာဒစ်ရှ် မူလတန်းကျောင်ဆရာမတဦး ပါဝင် တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လက ဒင်းနစ် စစ်ပန်ဟာ ကျောင်းကနေထွက်ပြီး ကာဒစ်ရှ် လူထု ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ (YPG) မှာ စနိုက်ပါသမားအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ “တကယ်လို့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် နေရာအားလုံး အိုင်အက်စ်တွေနဲ့ ပြည့်ပြီးတော့ သူတို့က
ဂျော်ဒန်လေယာဉ်မှူး မိုအက်ဇ်ကာဆာဘီအား အိုင်အက်စ်အကြမ်းဖက်တို့က ရက်စက်စက်စက် အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံက လက်တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု အရှိန်အဟုန်မြှင့် လုပ်ဆောင်နေရာ ဘုရင်အဗ္ဗဒူလာကိုတိုင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်နေသည်။ ဂျော်ဒန်ဘုရင်အဗ္ဗဒူလာကိုယ်တိုင် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ရာတွင်ပါဝင်ကြောင်း သတင်းကို ၎င်းတို့၏သတင်းရင်မြစ်များမှ အတည်ပြုေ
Posted: 07 Feb 2015 03:28 AM PST
ဓါတ်ပုံ - မျိုးမင်းစိုး “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သမ္မတဖြစ်ရေး မျှော်လင့်ချက်ကို မစွန့်လွှတ်သေးပါ။ အများက သံသယ ရှိကြသော်လည်း သူမ၏ သား ၂ ယောက် မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သည့် အတွက် သမ္မတဖြစ်ခွင့်မှ ပိတ်ပင်ထားသည့် ပုဒ်မကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အလွန် ကျင်းပမည့် လွှတ်တော်မှ တဆင့် ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်နေသည်။” ----- ----- ----- ----- ယခုနှစ်အတွင်းကျင်းပရန်ရှိသည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလ မြန်မာ့နိုင်ငံအ
Posted: 06 Feb 2015 06:47 PM PST
ဓာတ်ပုံ – အေအက်ဖ်ပီ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းမှာ ယောက်ျား၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေ အပါအဝင် အလောင်း ၆၀ ကို စွန့်ပစ် မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်ထဲမှာ တွေ့ခဲ့တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်နေ့က ပြောပါတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်း အကာပါကိုအနားက ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်ဟောင်းထဲက ရုပ်ကြွင်းတွေကို အဝတ်တွေနဲ့ပတ်ထားပြီး ထုံးလည်း ဖြူးထားတဲ့ အလောင်းအများအပြားက ပုပ်သိုးနေပြီလို့ နိုင်ငံတော် ရှေ့နေ
Posted: 06 Feb 2015 06:23 PM PST
ဂျော်ဒန်လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေး စတင် (ဖေဖော်ဝါရီ-၄ ၂၀၁၅) ဂျော်ဒန်တွေရဲ့ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေ IS အစ္စလာမ်မစ် စစ်သွေးကြွတွေ ဓါးစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားခဲ့တဲ့ ကူညီရေး လုပ်သား အမေရိကန် အမျိုးသမီး တဦး သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ ပြောကြားချက်ကို အတည် မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ အမေရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူက သောကြာနေ့မှာ ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အထူးစိတ်ပူနေပေမယ့် IS အစ္စလာမ်မစ် စစ်သွေးကြွတွေ ပြော
Posted: 06 Feb 2015 06:18 PM PST
ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် နိုင်းကစ်သီဆတ်ဒ် ကျန်ထနချိုင်း ဘန်ကောက်ရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား တွေကနေ အစုရှယ်ယာငွေ သန်းနဲ့ချီ လိမ်လည်ထား တဲ့ ထိုင်းကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်ကို သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးက ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးတင် စစ်ဆေး ခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ကောက် ဖလန်းဆောင်နယ်မြေမှာ ရုံးဖွင့်ထားတဲ့ Sunjaoping Co.Ltd ပိုင်ရှင် နိုင်းကစ်သီဆတ်ဒ် ကျန်ထနချိုင်း (အသက် ၄၆) နှစ် နဲ့တကွ အပေါင်းပါ မြန်မာ ၁၃ ဦး
Posted: 06 Feb 2015 03:29 PM PST
အကြိုဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ၉ ရက်နေ့ ပြန်လုပ်ဖို့ ရှိပြီး ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ် တွေပါ တက်သင့်ကြောင်း NNER က အစိုးရ ကို ပြော။ အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ၄ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံပွဲ ကို အစိုးရ က ပြည်ထောင်စု နေ့ နောက်ပိုင်း ရွှေ့ဆိုင်း ထားခဲ့တာ မှာ အခုဆို ဖေဖေါ်ဝါရီ လ ၁၄ ရက် သို့မဟုတ် ၁၅ ရက် နေ့မှာ ဆွေးနွေး ပွဲ ပြန်စဖို့ အစိုးရ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန နဲ့ ၄ ပွင့်ဆိုင်ထဲ ပါဝင်တဲ့ NNER ကွန်ယက် တို့ေ
Posted: 06 Feb 2015 01:39 PM PST
IS ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြနေတဲ့ ဂျော်ဒန်ပြည်သူတွေ (ဖေဖော်ဝါရီ ၆-၂၀၁၅) IS အစ္စလာမ်မစ် စစ်သွေးကြွအဖွဲ့က ဂျော်ဒန် တိုက်လေယာဉ်မှူးကို သတ်ဖြတ် လိုက်တာကို လက်စားချေတဲ့ အနေနဲ့ ဂျော်ဒန်က လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်နေ တာကို ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ပြည်သူတွေ မြို့တော် Amman က လမ်းမတွေပေါ်မှာ ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ Al-Husseini ဗလီကျောင်းက သောကြာနေ့ ၀တ်ပြုဆုတောင်းအပြီး ထွက်လာကြတဲ့ အဲဒီ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ သူေ
Posted: 06 Feb 2015 01:31 PM PST
မြိတ် ဖေဖော်ဝါရီ ၆ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်မြို့ မြိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက် အောင်မင်္ဂလာဈေး အပြင်ဘက်တန်းရှိ ရွှေဆိုင်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် လုယက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် တော်ဝင်သူ ရွှေဆိုင်တွင် မသင်းသင်းစိုးတို့ ညီအစ်မနှစ်ဦး အတူရှိနေစဉ် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးရောက်ရှိလာပြီး ရွှေဝယ်မည်ဟု ပြောဆိုကာ
Posted: 06 Feb 2015 01:17 PM PST
သထုံ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူး တစ်ဦးထံမှ ရွှေထည်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် ငွေများ နှိုက်ယူခံရသဖြင့် ကင်မွန်းချောင်း နယ်မြေ ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ရာ မွန်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကိုယ်တိုင် CCTV ကင်မရာများကို စစ်ဆေးရာမှ ခါးပိုက်နှိုက်ယူသူ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးမှ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ပြီး ရွှေထည် ပစ္စည်းများ ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted: 06 Feb 2015 12:55 PM PST
ဖေဖော်ဝါရီလ (၈)ရက်နေ့ ထုတ် EURO SPORTS Journal ( Vol-5No- 45 ) ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted: 06 Feb 2015 12:38 PM PST
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၇)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Posted by lu bo at 3:18 AM